နှစ် ၂၀၀-ကျော်မှ သမိုင်းဝင် လင်းဇင်းကုန်း မွတ်စလင်မ်သုဿာန် ဖျက်သိမ်းမည့်အပေါ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
About Burmese Muslims (Myanmar Muslims)ကျော်ကျော်ဦးမြန်မာစာမျက်နှာIslamic Video CenterKyaw Kyaw Oo words of LovePhoto Gallery, Masjids in Burma ( Myanmar)Read Holy Quran in BurmeseThe Muslims of Burma- ဝါးခယ်မမောင်မင်းနိုင်ပြန်ဆိုသည်吴寄语爱觉觉
နှစ် ၂၀၀-ကျော်မှ သမိုင်းဝင် လင်းဇင်းကုန်း မွတ်စလင်မ်သုဿာန် ဖျက်သိမ်းမည့်အပေါ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
Posted on October 17, 2013October 17, 2013 by kyawkyawoo	Posted in UncategorizedTagged Myanmar Muslim, Myanmar Muslim Cemetery with Historic monuments going to be destroyed, rewriting history of Myanmar Muslim	Dr Ko Ko Gyi's Blog
အောက်တိုဘာ ၆၊ ၂၀၁၃ M-Media သုတမောင်
ဇင်းလင်းကုန်း မွတ်စလင်မ်သုဿာန်အတွင်းရှိ သမိုင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဂူဗိမာန်များ
မန္တလေး ။ ။ မန္တလေးတိုင်း အမရပူရမြို့နယ်ရှိ လင်းဇင်းကုန်း မွတ်စလင်မ်သုဿာန်အား ၁၇.၁၀.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် မိမိတို့ သင်္ချိုင်းကော်မတီ အစီအစဉ်ဖြင့် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးရန် ၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇-ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် မန္တလေးမြို့ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ လင်းဇင်းကုန်း မွတ်စလင် သုဿာန် ကြီးကြပ်မှုကော်မတီထံသို့ ပေးပို့သော စာအရ လင်းဇင်းကုန်း သုဿာန် ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ဦးခင်မောင်စိုးထံသို့ M-Media မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ ပါတယ်။
View original post 226 more words	Rate this:Share this:FacebookTwitterPrintEmailLike this:Like Loading...
Singularity or Immortality from scientific viewThought for the year 2013
Blog Stats	195,396 hits
Recent Posts	The Remarkable Structure of the Qur’an.
Top Posts	Shall we pray (Dua) for the dead ?	Surah Al Fil is miraculously proved	Was Galon U Saw really behind assasination of General Aung San?	Photo Gallery, Masjids in Burma ( Myanmar)	Myanmar Muslims or Kalars?	Kyaw Kyaw Oo’s Pages	About Burmese Muslims (Myanmar Muslims)
Blog Readers said ….	kyawkyawoo on WordPress mobile is wonde…Renard Moreau on WordPress mobile is wonde…Nadeem Athar on Natural Disasters are not alwa…kyawkyawoo on Natural Disasters are not alwa…James on Natural Disasters are not alwa…James on Natural Disasters are not alwa…Sesama Muslim [terny… on Myanmar Muslims or Kalars…Sesama Muslim [terny… on Myanmar Muslims or Kalars…	CategoriesCategories
Mandalay anti Muslim Violence 2014 June
Visitors	My Previous PostsMy Previous Posts
Top Clickskyawkyawoo.files.wordpres…wirajhana1.wordpress.com/…wirajhanaeka.wordpress.co…tanzil.info Myanmar ataGlance	Total Population 56.5 million
Big Picture Photoblog ( Bostonglobe)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.Big Pictures